Raiisel wasaaraha Ireland oo darsaya xaalada cashuurta Apple ee wadanka | Waxaan ka socdaa mac
Raiisel wasaaraha Ireland wuxuu cabirayaa xaalada cashuurta Apple ee wadanka
Muddo bilo ah - waxaan dhihi karnaa sanado - Apple waxaa lagu yaqaanay inuu ka faa'iideysto siyaasad canshuur oo aan laga guuleysan karin ee Ireland. Si kastaba ha noqotee, tani si fiican kuma dhammaanin oo hadda wadanku waa inuu aruuriyaa 13.000 million euro wax walba oo Cupertino lagu leeyahay.
Waqtigu wuu dhaafay Apple-na ma bixin wixii lagu lahaa; wuxuu ku qaadanayaa xaalada tillaabo. Xaaladdan oo kale waxay ka dhigan tahay in Guddiga Yurub uu ku degdego Ireland oo uu u geynayo maxkamadaha Yurub in la ganaaxo. Xaaladdaani midna uma xagliso dhinac ama dhinac kale. Wax walba waxay umuuqdeen kuwo degan oo shirar kaladuwan ayaa udhaxeeyey dowlada Ireland iyo maareeyayaasha Apple. Si kastaba ha noqotee, Raiisel wasaaraha Ireland ma doonayo inuu sugo intaas ka badan wuxuuna bilaabay fariin.
Talaadadii la soo dhaafay, Leo Varadkar, ayaa carabka ku adkeeyay in ma rabto maxkamado badan oo ku lug leh; xaaladaasi wax faaiido ah uguma jirto xisbiyada midkoodna. Si kastaba ha noqotee, kama uusan labalabeynin inuu tilmaamo inuu rajeynayo in arrinta canshuurta ee Apple lagu xaliyo dhowr toddobaad gudahood iyo inuu u tilmaamay Apple inay soo gasho koontada lagu hayo lacagta. in la sameeyo iyadoo aan dib loo dhigin.
Lacagtu waxay ku sii jiri doontaa koontada la xanibay, haddii ay dhaqan gasho, lamana heli karo ilaa xukunka laga soo rido. Waana in labada Ireland iyo Apple aysan aad ugu heshiin aragtida Guddiga Yurub lana rumeysan yahay inay si cadaalad ah u ciyaareen markasta. Xitaa sidaas oo ay tahay, waa in sidoo kale lagu xisaabtamo in muddadii loo qoondeeyay bixinta 13.000 milyan ee yuuro in ay dhaqan gasho dhacay bishii Janaayo ee la soo dhaafay. Oo la hubiyo in arintu aysan horumarin, waxaa la go'aansaday in la siiyo taabasho labada dhinac ah.
Ugu dambeyntiina, xusuusnow in Apple sidoo kale ay ku talo jirto inay ku sharaddo abuurista shaqooyin badan gudaha Ireland. Gaar ahaan sababta oo ah waxaad dooneysaa inaad ka sameysato xarun xogeed galbeedka dalka. Si kastaba ha noqotee, waxay u muuqataa in xiriirka ay la leedahay dowladda Ireland uusan aheyn kii ugu fiicnaa tan iyo maalmo ka hor Tim Cook laftiisa ayaa taas xaqiijiyay Ma aysan ogeyn goorta ay bilaabaneyso shaqooyinka xaruntan loo maleynayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Raiisel wasaaraha Ireland wuxuu cabirayaa xaalada cashuurta Apple ee wadanka
Ciyaarta Machinarium waxaa lagu heli karaa oo keliya 3,49 euro
Jimcaha Madow ee Apple ayaa si rasmi ah u yimid Spain